🥇 fitakiana ny fangatahan'ny mpampiasa
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 409
Lahatsary momba ny kaontin'ny fangatahan'ny mpampiasa
Manafatra kaonty amin'ny fangatahan'ny mpampiasa
Ny kaonty amin'ny fangatahan'ny mpampiasa dia famantarana ny asan'ny mpanjifa izay mamela ny famakafakana ny fahombiazan'ny sampana fivarotana. Manampy amin'ny kaontin'ny fangatahan'ny mpampiasa ny mandeha ho azy. Betsaka amintsika no zatra mampiasa mailaka na Excel sy ireo mifanila aminy ho toy ny rafitry ny kaonty. Eny tokoa, ny fandrakofana tahirin-kevitra izay azo sivana tsara sy alamina dia fitaovana famahana olana voalohany momba ny olana amin'ny kaonty. Na izany aza, raha ny momba ny fanohanana, ny fametrahana ary ny fikirakirana ny fangatahana dia tsy ny mailaka sy ny Excel no fitaovana mety indrindra. Rehefa dinihina tokoa, ohatra, dia tsy avelany handefa fampandrenesana, ao anatin'izany amin'ny alàlan'ny SMS. Ny fangatahana kaonty avy amin'ny programa ho an'ny mpampiasa, mifanohitra amin'ireo fitaovana fampiasa tsotra tsotra indrindra, dia mamela ny fampiharana safidy isan-karazany. Tsy mitazona ny firaketana ny fangatahan'ny mpampiasa ihany, fa kosa mitazona ny fizotran'ny fanomanana tolotra ara-barotra, mirakitra ny zava-misy momba ny fifanakalozana, manome fanampiana ny mpanjifa ary manampy amin'ny hetsika aorian'ny asa fanompoana. Ny programa fangatahana mpampiasa kaonty avy amin'ny orinasan'ny rafitra USU Software dia vokatra tsotra sy takatry ny sain'ny mpampiasa. Mandritra ny fivoarana dia azonao atao ny manoratra fisoratana anarana mora foana nefa tsy mandany fotoana amin'izany, satria voasoratra ho azy ny fangatahana. Mety halefa ho fisoratana anarana ho azy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka, messenger instant, fivarotana an-tserasera, iharan'ny fidirana amin'ny Internet. Mikasika ny famenoana antontan-taratasy dia azo tanterahina amin'ny maody mandeha ho azy, ohatra, fenoy ho azy ny antsipiriany. Ao amin'ny programa USU Software dia hahita rakitry ny fangatahana avy amin'ny mpampiasa ianao, misy sivana isan-karazany ao aminy ka amin'ny fotoana rehetra dia ho hitanao ny angona ilainao, raha ohatra ka miandry ny valiny omena azy ny mpampiasa fangatahana. Ho faly amin'ny serivisy ny mpanjifanao. Ireo hazo dia misy ny karatry ny fangatahana, izay misy fampahalalana momba ny mpampiasa sy ny fangatahana. Ny karatra fangatahana dia toa tsotra ihany koa. Ny kaonty fanaraha-maso dia tena zava-dehibe amin'ny fitantanana tapakila. Vonona hanampy anao amin'izany koa ny automatisation USU-Soft, manampy anao tsy hanadino ny fe-potoana io, amin'ny fotoana mety dia mampahafantatra anao ny fahavitan'ny asa iray izy mba tsy ho tara loatra. Ity fomba ity dia ahafahanao mitazona ny sarinao tsara ary hanampy ny mpanjifanao. Ny programa USU Software dia afaka manao ny asan'ny mpiasa ho tsotra sy mety, manatsara hatrany ny fampiharana, mampiditra ireo haitao farany, ary mivoatra tsirairay ho an'ny orinasa tsirairay. Amin'ny alàlan'ny lampihazo, azonao atao ny manodina antontan-taratasy anatiny sy ivelany avy amin'ny mpanjifa, manamora izany ny fampidirana ilay tranonkala. Mikoriana haingana ny data, ary mihazakazaka haingana, ny statistika voatahiry, izay mety ho mora amin'ny fanaraha-maso ny fahombiazan'ny mpiasa sy ny fikambanana iray manontolo. USU-Soft dia misy tombony miharihary hafa noho ny programa, azo atao ny manao fitantanana ny kaonty ara-bola, ara-barotra, mpiasa, fitantanana, ary koa fanaovana fanadihadiana lalina amin'ny alàlan'ny tatitra momba ny vaovao. Amin'ny alàlan'ny loharano, azonao atao ny miasa miaraka amin'ny fitaovana, programa, messenger, ary fahalalana hafa. Zava-dehibe aminay ny mpanjifa rehetra, azonao atao ny mitsapa ny programa amin'ny alàlan'ny fampidinana ny kinova andrana ny lozisialy USU. Ny sehatry ny asa misy antontan-taratasy tsotra, mahomby ary avo lenta. Tantano tsara ny fikambanana misy anao amin'ny alàlan'ny sehatra marani-tsaina avy amin'ny USU Software.
Ny rafi-kaonty USU Software dia manao ny fizotran'ny kaonty ho an'ny fangatahan'ny mpampiasa ho tsotra sy mahomby. Miaraka amin'ny fanampian'ny USU-Soft, afaka manompo mpanjifa tsara ianao ary manome azy ireo tohana fampahalalana. Amin'ny alàlan'ny lozisialy USU, azonao atao ny mitantana ny fizotran'ny fifanakalozana ary manome ny fanohanan'ny mpampiasa.
Ny drafitra fitantanana kaonty rehetra, ny kaonty kaonty isaky ny baiko dia azo ampidirina ao amin'ny rafitra fitantanana kaonty. Ny programa kaonty dia mora ampiasaina ary ampiarahina amin'ny teknolojia farany. Ny programa dia miditra sy miditra haingana amin'ny tahiry voalohany momba ny mpanjifanao na ny fangatahanao, momba ny fandaminana, dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanafarana data na amin'ny alàlan'ny fampidirana tanana data. Ho an'ny mpampiasa tsirairay, azonao atao ny mampiditra ny habetsaky ny asa kasaina hatao, amin'ny farany, manoratra ny hetsika kaonty vita.
Ny programa dia miasa miaraka amin'ireo vondrona sy serivisy vokatra rehetra. Misaotra ny rafitra kaonty, afaka mitazona lisitra ankapobeny sy antsipiriany momba ny tahiry ianao. Ny vokatra mandeha ho azy dia azo alamina mba hamenoana azy ireo ny fifanarahana, ny endrika ary ny antontan-taratasy hafa.
Azo atao ny mifehy ny fidiram-bolan'ny orinasa. Ny rindrambaiko dia maneho ny statistikan'ny fangatahana sy ny fangatahana vita, amin'ny fotoana rehetra dia azonao atao ny manara-maso ny tantaran'ny fifandraisan'ny mpampiasa tsirairay. Misy ny fanaraha-maso ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy. Ao amin'ny rindrambaiko, azonao atao ny mitazona ny kaonty sy ny fanaraha-maso ara-bola amin'ny antsipiriany. Ny sehatra dia mifamatotra amin'ny telefaona. Noho ny rindrambaiko dia azonao atao ny mitantana ny sampana sy ny fizarazarana ara-drafitra. Amin'ny fampiasana ny rindrambaiko, azonao atao ny manangana tombana ny kalitaon'ny serivisy omena. Ny programa dia azo alamina hampifangaroana amin'ireo terminal fandoavam-bola. Ny mpampiasa rehetra dia tia ny famolavolana tsara sy ny fiasan'ny rindrambaiko tsotra. Azo atao ny mampifandray amin'ny bot telegram. USU-Soft dia mivoatra hatrany mankany amin'ny fampidirana amin'ny haitao farany. USU-Soft dia fitaovana maoderina miaraka amina karazana rindrambaiko maro karazana. Ao amin'ny tsenan'ny fangatahana ankehitriny, misy programa marobe amin'ny fangatahan'ny mpampiasa kaonty, amin'ny alàlan'ny fanisana ny isan'ny fihenam-bidy sy ny freebies, fa ny ankamaroan'izy ireo dia mijanona amin'ny faritra midadasika loatra ary tsy manisy kajy ny kaontera iray an'ny fikambanana manokana. Ny sasany amin'izy ireo dia manadino ny fampiasa ilaina, ny sasany manana fiasa ‘fanampiny’ izay tsy misy fandoavambola tsara kokoa, izany rehetra izany dia mitaky ny famolavolana ny rafitra ho an'ny filan'ny orinasa. Ity misy - USU Software system.